XFCE: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19? | Site na Linux
Banyere XFCE Desktọpụ Environment site n’oge ruo n’oge, anyị na-ekwukwa banyere akụkọ ha kachasị ọhụrụ (4.16, 4.14, 4.12, n'etiti ndị ọzọ), ma ọ bụ na ụfọdụ isiokwu egbu onwe ya, ma ọ bụ a na-akpali ngwa maka kwuru Ebe obibi Desktọpụ.
Dị ka Obodo gị si kwuo:
"XFCE bụ ebe desktọọpụ fechaa maka sistemụ UNIX. Ebumnuche ya bụ ịdị ngwa ma jiri obere usoro ihe eji arụ ọrụ, ebe ọ na-adịkarị mma ma dịkwa mfe iji.". Obodo XFCE (www.xfce.org)
Na mgbakwunye, ha gosipụtara na:
"XFCE bu ihe omuma ihe omuma UNIX nke modular na reusability. Ihe mejuputara ya bu otutu oru nke n’enye oru nile ichoro ichoputa na desktọọpụ nke oge a. A na-akwakọba ha iche iche ma nwee ike ịhọrọ ya na nchịkọta ndị dịnụ iji mepụta ezigbo ọnọdụ onwe maka ọrụ". Obodo XFCE (www.xfce.org)
1 Ihe niile gbasara XFCE
Ihe niile gbasara XFCE
Ihe oru ngo na XFCE malitere n'oge afọ 1996. Bụ ngalaba ya kwụsiri ike nke ewepụtara n'afọ ndị na - esote: 1998 (XFCE 2), 1999 (XFCE3) na 2003 (XFCE4).
Ugbu a ikpeazụ ya version kwụsiri bụ XFCE 4.14 na mmepe ụdị mbipute XFCE 4.16.
XFCE A na-ahụkarị ya dị ka ezigbo ngbanwe nke ochie, mana fechaa, dị mfe ma rụọ ọrụ GNOME2, nke e ji ihe ọgbara ọhụrụ ma dị arọ, dị mgbagwoju anya ma sie ike dochie anya ya GNOME3.
O ji ya aha, XFCE, n’ihi na na mbido ọ dabere n’ihe ndị a maara nke ọma XForms Nkịtị Enviroment. Ka ọ dị ugbu a, mbido ya enweghịzi ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ metụtara ya na aha Bekee ndị a: X Cholesterol Gburugburu Ebe obibi.
Ọ bụ Ebe obibi Desktọpụ na n'agbanyeghị ọtụtụ afọ nke nta nke nta na-agbanwe nwayọ nwayọ, ma eleghị anya n'ihi obere ìgwè nke ndị mmemme na ndị na-emekọ ihe ọnụ i jiri ya tụnyere GNOME na KDE Plasma. Kedu ọdịiche dị na ọkwa ya na uto ya nke obodo ndị ọrụ ya.
Na-echekwa a ọkọlọtọ nke ọdịdị oge na-aga iji dịrị mfe iji na nna ukwu, ngwa ngwa na mfe ịhazi, yana omenala na mma.
A na-ewu ya ugbu a na GTK3 Ngwá Ọrụ.
Na-enye a ezigbo nguzozi n'etiti ọsọ, nkwụsi ike na nhazi.
Ọtụtụ-eji dị ka Ndabere Desktọpụ Environment n'ọtụtụ Distros.
Nnọọ customizable na fechaa, karịsịa na Panel na Desktọpụ larịị site na ntọala na wijetị (goodies).
Ndokwa nke ndị obodo na ngwa GNOME n'ihi na ha abụọ na-eji GTK +. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịgba ọsọ nke ọma KDE Plasma ngwa ọ bụrụ na arụnyere ya n'ụzọ pere mpe yana ọba akwụkwọ ya dị mkpa, na sistemụ arụmọrụ.
Gburugburu ngwa ngwa dị mfe ma jiri ezigbo ngwa, ọ bụ ezie na ha anaghị adịkarị mgbagwoju anya (dị elu).
Obere ọrụ otu na obere nhazi nzukọ, ma o nwere obodo buru ibu nke ndị ọrụ na-eto eto.
Anaghị akwado ọtụtụ atụmatụ dị ka ndị ọzọ na-ajụ Desktọpụ Gburugburu dị ka Cinnamon ma ọ bụ MATE, ma ọ bụ nnọọ ihe siri ike ma dị obi umeala na ojiji ojiji.
para mụtakwuo Nwere ike ịga ya ukara website:
Nnukwu weebụsaịtị nke XFCE Project
Ebee ka ịchọta ya Wiki, Akwụkwọ, Projects (Akụkụ na Ngwa), lee akụkọ ya na ndepụta mgbanwe, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Njikọ ndị a dịkwa iji gbakwunye ozi na XFCE:
Simon Nzuzo Blog
Họrọ XFCE Desktọpụ Environment na ihe ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ set nke nchịkọta ndị ọzọ.
Reboot na nbanye site na ịhọrọ Ebe obibi Desktọpụ XFCE, ma ọ bụrụ na inwe ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ arụnyere na ọ bụghị na-ahọpụta ndị Njikwa Banye Lightdm.
Cheta na: Mgbe nwalere XFCE Desktọpụ Environment arụnyere, ị nwere ike iwunye ndị mgbakwunye ngwa ọdịnala na ngwa mgbakwunye dị mkpa nke otu, dika, dika imaatu:
Chetakwa, nke a bụ atọ post nke usoro banyere Gburugburu GNU / Linux. Nke mbụ gbasara GNOME, nke abụọ gbasara KDE Plasma, na ihe ndị na-esonụ ga-abụ ihe dị ka Cinnamon, MATE, LXDE na nke ikpeazu LXQT.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entorno de Escritorio» amara aha «XFCE», nke bụ n'etiti ọtụtụ ẹdude, ndị kasị zuru ezu n'etiti ìhè ndị na nke atọ kasị họọrọ ugbu a na ụwa nke «Distribuciones GNU/Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » XFCE: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Kali Linux 2020.1 bịarutere na ụfọdụ mgbanwe, n'etiti ha nbanye